कस्तालाई हुन्छ हृदयाघातको जोखिम? - Ratopati
कस्तालाई हुन्छ हृदयाघातको जोखिम?
हृदयाघातले अकस्मात् ज्यान लिन सक्छ । मुटुमा हुने विभिन्न समस्याका कारण हृदयाघातको जोखिम बढ्छ । मुटुको स्वस्थ गति कायम राख्न विभिन्न कुराले अर्थ राख्छ । आखिर कस्ता व्यक्तिलाई हृदयाघातको जोखिम बढी हुन्छ ? वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मिलनप्रकाश श्रेष्ठ भन्छन् :
-तपाईंलाई सुगर छ ? सचेत हुनुहोस्, मुटुमा समस्या हुने सम्भावना तपाईंलाई बढी हुन्छ । सुगरको औषधि सेवन गरे पनि, नियमित डाक्टरकहाँ सुगरको अवस्था जाँच गरे पनि र सुगर नियन्त्रणमा राखे पनि मुटुरोगको सम्भावना कायमै हुन्छ । यो अवस्थामा ग्यास्ट्रिकजस्तो लक्षण देखाउने गरी पेट र छातीको बीचको भाग दुख्छ । तर, ग्यास्ट्रिक भनेर डाक्टरकहाँ जान ढिला नगर्नुहोस्, हृदयाघात हुन सक्छ ।
– ब्लडप्रेसर हाई भएर औषधि सेवन गरेपछि अहिले ठीक छ ? अब मुटुमा समस्या हुँदैन भनेर ढुक्क नपर्नुहोस् । ब्लडप्रेसरको औषधि सेवन गरेर नियन्त्रणमा राखेको, चुरोट, सुर्ती र मदिरा सेवन गर्न छाडेको, नियमित आधा घन्टा हिँड्ने गरेको अवस्थामा पनि हृदयाघातको सम्भावना रहिरहन्छ । मुटुको चेकजाँच गराउन नछाड्नुहोस् । नियमित सबै काम गरेर वेला–वेलामा मुटुको स्वास्थ्य जाँच पनि गराउनुहोस् ।
-कसैलाई ब्लडप्रेसरको समस्या भएर पनि लक्षण नदेखिन सक्छ । लक्षण नै नदेखिएपछि औषधि सेवन गर्ने कुरै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा हृदयाघातको जोखिम हुन्छ । ब्लडप्रेसर सन्तुलनमा छ÷छैन, राम्रोसँग जाँच गराइराख्नुपर्छ । नत्र अचानक सास फेर्न गाह्रो हुने समस्या देखिएर हृदयाघात हुन सक्छ ।
-तपाईं ब्लडप्रेसरको नियमित औषधि सेवन गर्नुहुन्छ, व्यायाम पनि नियमित गर्नुहुन्छ र खानपानमा लापरवाही छैन, तर एक्कासि छाती गह्रौँ भएको महसुस भयो भने डाक्टरकहाँ जान ढिला नगर्नुहोस् । पहिले ठीक छ भन्दैमा सधैँ ब्लडप्रेसर सही छ भन्ने हुँदैन । ब्लडप्रेसर बढ्यो भने औषधि सेवन गरेर मात्रै नियन्त्रणमा आउँछ भन्ने पनि हुँदैन । मुटुको स्वास्थ्य जाँच नियमित गराइराख्नुपर्छ । जुनकुनै वेला हृदयाघात हुन सक्छ ।
-पहिले नै मुटुका रक्तनली बन्द भएर स्टेन्ट राखिएको अवस्थामा हुनुहुन्छ ? सचेत हुनुहोस्, हृदयाघातको जोखिम तपाईंमा पनि बढी हुन्छ । दुखाइको समस्या भयो भने डाक्टरलाई देखाउन ढिला नगर्नुहोस् । तपाईंले आफूलाई ठीक रहेको महसुस गरे पनि डाक्टरको सल्लाहअनुसार वेला–वेलामा मुटु जाँच गराउन नछाड्नुहोस् ।
सुर्ती सेवन गर्ने, हाई ब्लडप्रेसर भएका, सुगरका बिरामी, मोटोपन बढी भएका, रगतमा बोसोको मात्रा बढी भएका, तनावमा धेरै समय बिताउने, शारीरिक व्यायाम कम गर्ने, समय–समयमा मुटुको जाँच नगराउने व्यक्तिलाई हृदयाघातको जोखिम बढी हुन्छ ।